China Mhepo yekuwedzera shaft Kugadzira uye Fekitori | Kangpa
Puri inopisa utsotso namira lamin ...
Blister Kurongedza Hydraulic P ...
Magnetic upfu akamedura
Mhepo yekuwedzera shaft
1. Iyo inflation yekushanda nguva ipfupi. Zvinongotora masekondi matatu kuti zviparadzanise uye nekuisa shaft yekuwedzera mweya uye pepa chubhu kupedzisa inflation uye deflation. Izvo hazvidi kuti zviparadzanise chero zvikamu pamagumo emugodhi kuti ubate zvakasimba pombi chubhu.
2. Pepa chubhu iri nyore kuisa: bepa chubhu inogona kufambiswa uye kugadziriswa chero chinzvimbo pane axis nekuita kwekufutisa uye kudzikisira.
3. Huremu huremu-huremu: Hurefu hwesimbi dhayamita hunogona kutsanangurwa zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi, uye yakasimba-simbi simbi inoshandiswa kuwedzera huremu-huremu.
Tumira neindaneti kwatiri
Iyo yekuwedzera mweya shaft yakakamurwa kuita kiyi strip mhando uye slat mhando. Iyo yekuwedzera mweya shaft iri nyore kwazvo uye inokurumidza kushandisa. Izvo zvinongoda kugadzirira yayo yega sosi yemhepo. Iko kumanikidza kwemhepo kunodzorwa mukati mehuremu hwe6-8kg / cm2. Izvo zvekunze zvikamu (senge kutenderera -Yakaumbwa bepa chubhu), sekureba sekunge mweya wepfuti wakafemerwa kumhepo kamhepo pane yekuwedzera mweya shaft, inogona kupedzwa, uye zvekunze zvikamu (senge yakatenderera pepa chubhu) inoda sunungurwa kana bepa rikaburitswa, pusha pombi yemhepo neruoko Izvo zvinotsvedza zvekunze (senge rakatenderera bepa chubhu) pachikamu chepamusoro chinogona kuburitswa.
4. Kukwidziridzwa kwepamusoro kwehupfumi: Iyo shaft yakagadzirirwa mabasa akakosha, uye inogona kushandiswa kune ese marudzi emapepa machubhu ehutete, kuonda, hupamhi uye kuderera.
5. Nyore kugadzirisa uye kushandisa kwenguva yakareba nguva: Iyo yekuwedzera mweya shaft chikamu chimwe chete, uye chikamu chimwe nechimwe muchimiro chayo chine chakatemwa chakatemwa, icho chinogona kuchinjaniswa uye kushandiswa, zvichiita kuti zvive nyore kuchengetedza.
1. Inoshandiswa zvakanyanya: Sechikamu chakazvimiririra chakagadzirwa, shaft yekuwedzera mweya iri kubva pa1 inch kusvika ku12 inches. Kureba uye saizi zvinotemerwa nezvinodiwa chaizvo nemutengi. (Semuenzaniso, iyo yekunze isina kufukidzwa dhayamita yetatu-inch yekuwedzera mweya shaft iri 74mm, uye mushure mekukwira kwezvinhu iri 78- 82mm; , kana imwe inowirirana yepakati-ichitenderera michina, mhepo yekuwedzera shaft yefekitori yedu inogona kushandiswa.
2. ine hupfumi uye inoshanda: dhizaini yeiyo shaft yakagadzirirwa zvido zvebasa chaipo, uye inogona kuiswa kune akasiyana marudzi eakaomeswa machubhu, senge ukobvu, upamhi, uye kuderera.
3.Kushandisa kwenguva yakareba uye nyore kugadzirisa: Kunyangwe iyo yekuwedzera mweya shaft iri yekushandisa michini, chikamu chimwe nechimwe muchimiro chayo chine gadziriso yakatarwa uye inogona kushandiswa mukusiyana, zvichiita kuti zvive nyore kuchengetedza. Fekitori yedu ine zvinodiwa zvakanyanya pahunhu hwese hwezvinhu zvemhepo inokwenenzverwa, uye mhando yechigadzirwa inovimbiswa zvachose.
4. Chishongedzo chimwe chete: Iyo yekuwedzera mweya shaft chikamu chimwe chete chemuchina wekutenderera nekusunungura muchina. Chikamu chega chega muchimiro chayo chine saizi yakatarwa uye chinogona kuora uye kusanganiswa kuita kugadzirisa kuri nyore uye kunogara kwenguva refu.
5. Unyanzvi: Fekitori yedu inonyanya kugadzira kugadzirwa kwemhepo shafts, uye kune hunyanzvi huinjiniya nevashandi vehunyanzvi hwekutsvaga pamusika pane dhizaini, kuisirwa uye kushandiswa kwemhepo yekuwedzera shafts.
6. Hukuru kutakura kugona: Iyo yekuwedzera mweya shaft inogona kugadzirwa zvinoenderana neiyo chaiyo modhi, uchishandisa yepamusoro-simbi simbi yekuwedzera iyo inobereka kugona. Semuenzaniso, zvigadzirwa zvesimbi zvinogona kusarudzwa kune avo vane huremu hwekutakura hunopfuura 1 tani.
7. Pfupi yekushandisa nguva: Zvinongotora maviri masekondi kuti ufukidze uye kushatisa roll roll yekuparadzanisa nekuisa roll roll. Zviri nyore uye zviri nyore kuisa roll roll, yakachengeteka uye inoshanda. Inogona kuiswa kune ese michina uye zvishandiso zvinoshandiswa kumhanyisa nekusunungura. Mhepo yekuwedzera shaft. Kureba kwemhepo yekuwedzera shaft kunogona kusvika pamamita matanhatu kana kupfuura, uye ipfupi kureba inogona kuve mazana emamirimita. Iyo yakareba yakatarwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
8. Rudzi rwecheni yemhepo yekuwedzera shaft inowedzera tambo imwechete, uye fulcrum inopararira kune yega yega kiyi bharanzi kuenzanisa simba, iro rinokodzera muchina rewinding yezvinyorwa zvine huremu hwekutakura huremu.
Iyo cantilever mweya yekuwedzera shaft iri nani pane yakajairwa mweya yekuwedzera shaft nekuti iyo shaft yese haidi kuburutswa nguva dzese. Izvo zvinhu zvinogona kutorwa mushure mekunanga deflating, nekuti upamhi hwayo hausi hukuru, saka zvakasikwa mashandiro ari nyore. Iyi zvakare iri shaft yekuwedzera mweya inosarudzwa nemamashini mazhinji ane huremu hureruka uye hupamhi hudiki. Chero bedzi mubato unofufutirwa uchinge wakakomberedzwa nemhepo yemhepo pane yekuwedzera mhepo shaft, iyo yekumusoro inotsvedza yemhepo moyo inogona kubviswa, uye cheni inodzokera pakuonekwa kwayo kwepakutanga.
Iyo yakakosha simbi furemu ine bhokisi-rakaumbwa hwindo rakacherwa kunze kumucheto wakatarwa wedivi rekushandisa re cantilever mandrel yekuona kusimba kuomarara kwepuratifomu yekudhinda. Chigaro chekutakura chakaiswa mukati mechinhu chinofambiswa chesimbi, uye iyo simbi chivharo chakagadzirwa neepamusoro-chaiyo waya waya. Inotungamirwa netsvimbo, iyo inofamba nzvimbo yeiyo screw tsvimbo iri pakati wepakati mutsara weplate chinotenderera mandrel, uye mitsara mitsara yakaiswa pamusoro nekumusoro kumucheto kwehwindo-rakaumbwa hwindo kugadzirisa iyo inofamba simbi block, kuti chengetedza kugadzikana kwepuratifomu yekudhinda mune yekumhanya-mhanyisa mashandiro.
Mune ino dhizaini, iko kusungirirwa kwemandrel kunozvitenderera zvachose, uye kufamba kwese sikuruu tsvimbo uye kukiya kwemugumo wemugumo hakubatanidzi zvinhu zvevanhu. Iyo inofambiswa simbi block yakagadziriswa kune furemu neepamusoro uye yepazasi mutsara raireti njanji, uye nekuti sikuruu tsvimbo inofamba pakati wepakati mutsetse weplate roller mandrel, kukanda kwepakati pekufungidzira humburumbira pane iyo ndiro roller uye yekutyaira mafambiro ebhora sikuruu ese ari maviri ari kuitwa Pakati peplate roll roll mandrel, inongo dzvanywa diki yemuno inomanikidzwa, uye nekuda kwekuti simba rinotakura rinoita chete pakati peplate roll roll mandrel, hapana nguva pane rutsigiro furemu.
Kune marudzi mazhinji, anosanganisira 1 inch, 1.5 inch, 2 inch, 2.5 inch, 3 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, etc. Mhepo yekuwedzera shafts yemataurirwo akasiyana inogona kugadziriswa uye kugadzirwa zvinoenderana nemutengi zvinodiwa.
Pashure: Flat hydraulic yekucheka muchina
Zvadaro: Glue chinotenderera
Kuwedzera Kwemhepo Shaft
Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri
Four-column hydraulic yekucheka muchina
Nzvimbo A, 5th Floor, Kaku Shangzhong Gaocheng, No. 77 West Tailong Nitou Road, Shatian Town, Dongguan City
+86 135 3842 2390
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Hot Zvigadzirwa - Sitemap
Kupisa Melt Glue Anonyorera, Otomatiki Inopisa Melt Glue Laminating Machine, Yakapisa Melt Glue Laminating Machine YeJasi, Kupisa Melt Glue Laminating Machine Ine Ce Chitupa, Pur Hot Melt guruu Nonwoven Laminating Machine, Pur Hot Melt Inonamatira Laminating Machine,
Rova pinda kuti utsvage kana ESC kuti uvhare